Ardayda Dugsiyada Hoose Dhexe Oo Wali Lacag Laga Qaado Iyo Xukuumadda Oo Indhaa Ka Qarsanaysa | Saxil News Network
Ardayda Dugsiyada Hoose Dhexe Oo Wali Lacag Laga Qaado Iyo Xukuumadda Oo Indhaa Ka Qarsanaysa
January 31, 2015 - Written by admin
Hargaysa (Saxilnews.com) -Ardayda dugsiyada hoose dhexe Somaliland gaar ahaan magaaladda Hargeysa, ayaa laga qaadaa lacagta fiiga bisha oo xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo ay ku dhawaaqday in ay lacag la’aan ka dhigtay sanadii 2011-kii.
Ardaydan ayaa lacagtan laga qaadayay tan iyo intii xukuumaddu ku dhawaaqday in lacag la’aan ay ka dhigtay dugsiyada hoose dhexe wakhti haatan laga joogo shan sano ku dhawad. Wargayska Waaheen oo isku dayay in amuurtan uu wax ka ogaado ayaa kulamo la qaaday qaar ka mid ah ardayda dugsiyada Hargeysa kuwaas oo xaqiijiyay in lacag laga qaado, waxase ka muuqda meesha in la baday qaabkii lacagtaas loo qaadayay.
Ardayda dugsiyada hoose dhexe dhigata ayaa hore lacagta marka laga qaadayo loo sheegi jiray inay fiigii bisha soo qaadaan, waxase haatan loo sheegaa in lacagta ay soo qaadayaan ay tahay mid wax lagaga qabto adeegyada dugsigu uu u baahan yahay sida biyaha iyo hagaajinta kuraasta.
Axmed oo aanan halkan ku soo gudbin magaciisa oo dhamaystiran dhigtana mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee Hargeysa ayaa wargeyska Waaheen u sheegay in lacag laga qaado bil kasta looguna sheegay kharashaadka biyaha iyo dayactirka dugsiga, waxaana isaga oo arimahaas ka hadlaayay uu yidhi“Waxa nalaga qaadaa inta badan todobo kun oo shilin marka ay bishu dhamaato ama wali iyada oo aan dhamaan, macalimiintu waxay nagu yidhaahdaan lacagtii biyaha iyo dayac tirka dugsiga iyo kuraasta.”
Sida oo kale Kaltuun oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe ee Hargeysa ayaa iyaduna sidan oo kale u sheegtay wargeyska Waaheen“ Haa,waa nalaga qaadaa bil kasta lacagtaas, waxaanay macalimiintu noo sheegaan in biyaha dugsiga lagu shubo iyo waxii kale ee loo baahdo, laakiin sidan oo kale uun baanu markii horeba u bixin jirnay lacagta.”
17/1/2011 ayay ahayd markii wasiirkii maaliyada Somaliland ee wakhtigaas Maxamed Xaashi Cilmi uu ku dhawaaqay in lacag la’aan laga dhigay guud ahaan dugsiyada hoose dhexe ee dawladu maamusho, arintaas oo haatan u muuqata mid aan suurto galin xukuumadduna ay indhaha ka qarsanayso.
Hargeysa(Waaheen)- Ardayda dugsiyada hoose dhexe Somaliland gaar ahaan magaaladda Hargeysa, ayaa laga qaadaa lacagta fiiga bisha oo xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo ay ku dhawaaqday in ay lacag la’aan ka dhigtay sanadii 2011-kii.